Tetikasa Mahay: herinandron’ny fanabeazana mampiaty | NewsMada
Tetikasa Mahay: herinandron’ny fanabeazana mampiaty
« Miara-mientana ho fahombiazan’ny fanabeazana mampiaty». Io ny lohahevitra voizina ao anatin’ny fanamarihana ny “Herinandron’ny fanabeazana mampiaty” hotontosaina ny 3 ka hatramin’ny 8 desambra izao.
Mikarakara hetsika ny tetikasa Mahay Fanabeazana mampiaty FJKM, tarihin’ny departemantan’ny sekoly FJKM, misitraka ny fanohanan’ny CBM na ny Christoffel. Tanjona ny fanatsarana ny fampidirana ny ankizy manana fahasembanana any amin’ireo sekoly tsotra izay mampiaty azy ireo.
Faritra efatra ny isian’izany ezaka fampidirana an-tsekoly izany: ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinankaratra, ny faritra Atsinanana ary Moramanga.
Manomana hetsika isam-paritra ny mpikarakara ka hisy ny kaonferansa samihafa sy fihaonamben’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpisehatra rehetra. Eo koa ny fampiofanana ho an’ny ray aman-dreny sy fiarahana midinika ny amin’ny fanabeazana mampiaty.
Tsy ho diso anjara ireo sekoly efa mandray anjara amin’ny fampiarana ireo ankizy manana fahasembanana. Hisy ny hetsika fanatanjahantena sy kolontsaina nomena ny lohahevitra manokana hoe: “Fo miara-mitempo ho an’ny fanabeazana mampiaty”.
Amin’izao fotoana izao, 56 ireo sekoly tsotra mandray ny ankizy sembana hiara-hianatra amin’ny ankizy tsy manana fahasembanana. Ankizy manana fahasembanana 523 ihany, araka izany, no misitraka izany fampianarana miaraka amin’ny ankizy rehetra izany. Vitsy izany raha miohatra amin’ny filana ka manentana ireo sekoly tsotra ny tetikasa sy ny fikambanana CBM hisokatra amin’ireo ankizy manana fahasembanana ireo.
Tanjona amin’ny taona 2020 ny hitomboan’ny isan’ny ankizy sembana mianatra an-tsekoly sy tsy ho tratran’ny fanilikilihana.